Venezoela: Fikarohana Manamafy Ny Fisian’ny Sivana Atao An’ireo Sehatra Filazambaovao, Tranonkalam-pifanakalozana Ara-Bola · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2016 5:15 GMT
Pejy fandrasain'ny IPYS “Navegar con Libertad” (Mitety an-kalalahana).
Fanadihadiana iray vao haingana notarihan'ny Ivontoeran'ny Fanaovana Gzety sy ny Fiarahamonina (IPYS) ao Venezoela no nanamafy fa 43 raha kely indrindra ireo tranonkala isankarazany nobahanana tao amin'ny firenena, mitondra fanazavana vaovao amin'ny fomba fanivànana ataon'ny governemanta Venezoeliana.
Niompanan'ilay fikarohana ny fandraketana ireo tranga momba ny fidirana tamin'ireo tranonkala sy ny tsy fironan'ny aterineto, ny fampidinana ho aotra ny fikarakaràna ireo tambajotra nasionaly nandritry ny fifidianana tamin'ny 2015. Tao anatin'ny 48 andro (nanomboka ny 25 Novambra 2015 hatramin'ny 14 Janoary 2016), norefesin'ilay fikambanana ny hafainganan'ny fifandraisana sy ny fibahanana ary nangoniny ireo angondrakitra nisy teboka 6,4 tapitrisa. Hitan-dry zareo fa tranonkala nifandray tamin'ny resaka varomaizin'ny fifanakalozana vola ny 44 %, raha mifandray amin'ny resaka fampahalalam-baovao kosa ny 19%, bilaogy mpanakiana ny antoko mpitondra ny 12%, ary filokàna ny 9%. Hita voasakana ihany koa ny sasany amin'ireo tolotra mpanafohy rohy, mpanafina anarana ary mpandingana sàkana.
Hitan'ilay fanadihadiana ihany koa ireo rehetra eo an-toerana mpanome tolotra aterineto mampiasa fibahanana anaran-tsehatra DNS (domain name system), teknika izay anomezan'ireo lohamilina mpanome anaran-tsehatra valiny diso ho an'ireo fangatahana ho anà sehatra iray voafaritra. Rehefa voabahana amin'ny alàlan'ny DNS ny tranonkala iray, dia na disoin'ilay lohamilina ny valin'ny fangatahana, na laviny ilay fangatahana rehefa antsoina io tranonkala io. Tsy nisy porofo hitan'ilay fanadihadiana ny momba ireo karazana teknika hafa fanivànana, isan'izany ny fibahanana adiresy IP na tenimiafina. Na izany aza, zavadehibe ny fitànana an-tsaina fa andrana savalàlana ilay fanadihadina natao taminà ampahany kely amin'ireo tranonkala izay tsy afaka idirana ao amin'ny firenena. Ny fikarohana teo aloha dia nanondro fa manodidina ny 1.500 ireo tranonkala voabahana tao Venezoelà taminà vanimpotoana voafaritra ho an'ny taona 2015.
Inona ny Anaran-tSehatra?
Any amin'ny fotony, ny aterineto dia tambajotra iray ahitàna solosaina maro afaka mifandefa hafatra izy samy izy. Ny solosaina sy tranonkala tsirairay tafiditra anaty aterineto dia manana adiresy Internet Protocol (IP) iray avy — andian-tarehimarika toa raisina kisendrasendra. Ny Anaran-tSehatra no mampifandray ny adiresy IP tsirairay amin'ny adiresy URL ho an'ny tranonkala iray, ahafahan'ireo mpampiasa miditra aminà anarana iray mora tadidiana, fa tsy mila mitadidy na mitendry andian-tarehimarika lavabe.
Ohatra, raha maniry hitsidika ny tranonkalanay ny mpampiasa iray, azony atao ny mitendry ny hoe globalvoices.org eo amin'ny fitety. io no maniraka ny solosaina ampiasainy handefa hafatra fangatahana any amin'ny lohamilina iray mitantàna anaran-tsehatra izay hahita ny adiresy IP mifanandrify aminy ka manome fahafahana miditra ao amin'ny Global Voices ho an'ilay mpampiasa. Rehefa voabahana amin'ny fampiasàna DNS ny tranonkala iray, dia na handà ny fidirana, na hanome valiny diso ilay lohamilina.
Tamin'ny 90% -n'ireo tranga hita, nitovy daholo ny fomba nibahanana ireo tranonkala nanerana ireo dimy goavana indrindra mpanome tolotra aterineto ao Venezoelà. Toa manondro ny fanitsakitsahana ilay lalàna malaza Lalàna momba ny Andraikitra Sosialy amin'ny Radio, Fahitalavitra ary Media Elektronika daholo ny zavatra rehetra, manome hevitra hoe nobahanana ireo tranonkala ireo noho ny fampiharana ny fepetram-pitantanana iray voafaritry ny lalàna voalaza etsy ambony. Ny marimarina kokoa, tsoakevitr'ilay ivontoerana ny hoe ireo tranonkala ireo dia noraisina ho nanentana fandàvana ny lalàna, tsy fankatoavana manampahefana na “mamboly korontana” ao anatin'ny fiarahamonina.
Nomarihan'ilay fanadihadiana ihany koa ny fa ny orinasa mpanome tolotra finday Movistar no manana ny tranonkala betsaka indrindra niharan'ny fibahanana, isan'ireny ireo tranonkala izay tsy nobahanan'ny CANTV, fifandraisandavitra an'ny fanjakàna. Mety ho vokatr'ilay Lalàna momba ny Andraikitra Sosialy ao Venezoelà io, izay milaza ao anatiny fa mety hamoahana sazy ireo mpanome tolotra aterineto raha toa tsy manaiky hanaraka ny andraikiny manoloana ireo votoaty voaràra.
Raha tsy zavamiafina ireo fomba fanaon'ny governemanta amin'ny fibahanana ny aterineto (ity no governemanta namoaka didy hibahanana tranonkala tao amin'ny fahitalavi-panjakana tany amin'ny 2014 tany ho any), ireo dingana manokana, ny antony ary ireo tranonkala manokana voasakana amin'izao fotoana izao, ary ireo vaovao rehetra momba ny fifandraisandavitra dia raisina ho “tsiambaratelom-panjakana”. Nampiasaina io fomba filaza io tao anatin'ny didy iray navoakan'ny Fitsaràna Tampony tamin'ny 2014 ho setrin'ny fangatahana iray hahazo vaovao momba ny sivana atao amin'ny aterineto nalefan'ny ONG Espacio Público ao Caracas. Kanefa, efa fantatra fa ny Kaomisiona Nasionaly momba ny Fifandraisandavaitra (CONATEL), sampan-draharaha iray izay eo ambany fifehezan'ny Mpanatanteraka, dia namoaka fanenjehana sivy raha kely amin'ireo mpanome tolotra aterinto noho ny nanomezan'izy ireo fahafahana miditra taminà tranonkala vitsivitsy. Taminà tranga azo isain-tànana, ny fepetra tahaka izany dia nampahafantarina ny daholobe, toy ny raharahan'ny fantsom-pahitalavitra Kolombiana NTN24, izay nobahanan'ireo rehetra mpanome tolotra taorian'ny didy navoakan'ny CONATEL rehefa avy namoaka fandrakofana ireo hetsi-panoherana tamin'ny 2014.
Amin'izao fotoana izao ny IPYS dia mandrafitra rafitra iray ho fanarahana maso ireo fameperana ny fidirana amin'ny aterineto sy ny tsy fironan'ny aterineto ao Venezoelà, amin'ny fanovozana avy amin'ìreo lesona azo tamin'ity fanadihadiana savalàlana ity. Ny tatitra manontolo (amin'ny fiteny Espaniola) ary ny angondrakitra niaingàna dia azo raisina ao amin'ny tranonkalan-dry zareo.